Nhasi tinorangarira Pablo Neruda | Zvazvino Zvinyorwa
Nhasi tinorangarira Pablo Neruda
Carmen Guillen | | Vanyori, Type, Nhetembo, dzakawanda
"Ndinogona kunyora mavhesi anosiririsa manheru ano". Saka anotanga, sezvingabvira, anodzokororwa uye anozivikanwa nhetembo yeNeruda huru. Ndiyo nhetembo nhamba XX yebasa rake "20 Nhetembo Dzerudo uye Rwiyo Rwakapererwa". Kunyangwe izvozvi zvandiri kufunga nezvazvo, pamwe ndizvo "Ndinoifarira kana iwe ukanyarara nekuti unenge usipo ...". Asi Neruda inozivikanwa kwete chete nendima idzi, asi nezvimwe zvakawanda.
Nhasi tinorangarira Pablo Neruda, nekuti kuti tirangarire mumwe wevananyanduri vakanaka kwazvo vakaberekwa nemabhuku, hatifanirwe kumirira mhemberero dzemhando ipi neipi. Nakidzwa nekuverenga ichi chinyorwa sekufarira kwandakaita kunyora.
Chilean nekuzvarwa, chete, nekuti basa rake ndere nyika dzese uye zita rake nesurname zvinozivikanwa pasi rese. Akazvarwa muna Chikunguru 12, iro gore rinorevei, uye zita rake harisi iro raakasaina naro mabasa ake makuru. Ricardo Eliecer Neftali Reyes Basoalto, iri raive zita rake chairo.
Pablo aida ChileAida nyika yake sekuda kwaaiitwa nenyika yake. Ingo tarisa pamabasa ake "Ndinoreurura kuti ndakararama" o "Pamahombekombe epasi" kuti aone kuda uku kwenyika yake yaakabva.
Aida vakadzi, senge nyanduri wese akanaka, asi uyo anonyanya kubuda munhetembo dzake, uye saka ndinofunga kuti uyo akareba kwenguva refu mupfungwa dzake, aive Matilde Urrutia, mukadzi wake.
Mbiri mbiri dzakapfuura idzo dhata dzandinoenderera ndichitaura senge tsananguro, nekuti vadetembi havafanirwe kungozivikanwa chete nekuda kwemubairo, kana zvirinani ndiwo mafungiro angu akazvininipisa, akahwina mubairo Mubairo weNobel muMabhuku muna 1971 uye akawana a Doctorate Honoris Causa paYunivhesiti yeOxford.
Izvo zvakaoma kusarudza nhetembo imwe kana mbiri chete naNeruda kuti uvasiye semuenzaniso, asi zvinonyanya kuomarara kusawira mune yakasarudzika sarudzo nhetembo dzake mbiri dzine mukurumbira, kwandiri yakanaka kwazvo ...
Yekutanga kubva pamuromo waNeruda iye, wechipiri ndinokusiira iwe mukunyora, kuitira kuti munhu wese agone kuiverenga pavanonzwa kuda uye vachiifarira nezwi ravo pachavo nguva zhinji pazvinenge zvichidikanwa.
Ini ndinokufarira iwe pawakavhara nekuti iwe haupo,
uye munondinzwa muri kure, uye inzwi rangu harikubatii.
Zvinoita kunge maziso ako abhururuka
uye zvinoita sekunge kutsvoda kunovhara muromo wako.
Sezvo zvinhu zvese zvakazara nemweya wangu
Iwe unobuda muzvinhu, uzere nemweya wangu.
Kurota shavishavi, iwe unoita kunge mweya wangu,
uye iwe unotaridzika sezwi kushushikana.
Ndinokuda iwe paunenge wakanyarara uye wakaita kunge uri kure.
Uye iwe wakafanana nekunyunyuta, lullaby butterfly.
Uye munondinzwa kubva kure, uye inzwi rangu harisviki kwamuri:
Nditendere kuzvinyaradza nekunyarara kwako.
Rega nditaurewo newe nekunyarara kwako
chakajeka semwenje, yakapfava semhete.
Iwe wakaita seusiku, wakanyarara uye wakanamirwa.
Kunyarara kwako kunobva kune nyeredzi, kusvika zvino uye zvakapusa.
Ndinokufarira paunonyarara nekuti hauna.
Kure uye kunorwadza sekunge wafa.
Izwi ipapo, kunyemwerera kwaringana.
Uye ndinofara, ndinofara kuti hachisi chokwadi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Vanyori » Nhasi tinorangarira Pablo Neruda
20 nhetembo dzerudo uye rwiyo rwekupererwa
Akasviba uye asikana agile, iro zuva rinogadzira michero,
iyo inovhuna gorosi, iyo inokanganisa chiwanikwa,
akaita kuti muviri wako ufare, maziso ako anopenya
uye muromo wako une kunyemwerera kwemvura.
Zuva rakasviba dema rinozvimonera rakatenderedza shinda dzako
yemurume mutema, paunotambanudza maoko.
Unotamba nezuva kunge nerukova
uye anosiya madziva maviri akasviba mumaziso ako.
Akasviba uye asikana musikana, hapana chinondiunza padhuze newe
Zvese pamusoro pako zvinondibvisa, semasikati.
Iwe ndiwe jaya rinonakidza renyuchi,
kudhakwa kwemasaisai, simba repiki.
Mwoyo wangu wakasuwa unotsvaga iwe, zvisinei,
uye ndinoda muviri wako unofara, izwi rako rakasununguka uye rakatetepa.
Yakanaka uye yakajeka brunette butterfly
sebindu regorosi uye zuva, poppy nemvura.
Pindura kune iacobust
Kubvumbi kwemakwikwi emitambo kuSpain
Nei kuve muraibhurari kusiri kutonhorera sezvazvinonzwika